'Iipili eziMnyama' Iiseti ezintathu zeXesha le-Ep ukusasaza kwiNetflix kaJuni 5-iHorror
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	'Iipili eziMnyama' Iiseti ezintathu zeXesha le-Ep ukusasaza kwiNetflix kaJuni 5
'Iipili eziMnyama' Iiseti ezintathu zeXesha le-Ep ukusasaza kwiNetflix kaJuni 5
by UTimothy Rawles Ngamana 17, 2019
by UTimothy Rawles Ngamana 17, 2019 1,013 imbono
Black Mirror uyabuya ngenxa elinye ixesha lonyaka, kwaye njengoluhlu lwayo lwesibini, luya kuba neziqendu ezithathu kuphela.
I-anthology iye yanconywa ngenxa yokukwazi ukuba ngummeli Indawo yeTwilight kwiminyaka ye-elektroniki. Ukujongana nezifundo ezinje ngempembelelo yemidiya yoluntu kunye netekhnoloji yeerobhothi, Black Mirror Inomdla wayo kwizinto ezothusayo zeqhosha lamandla eluntwini.
Ekupheleni konyaka ophelileyo, bahamba ngohlobo lweemeta kunye nenqaku labo lokunxibelelana Bandersnatch efumene uphononongo oluxubekileyo ngokubhekisele kumabali kodwa yancoma, mhlawumbi ngokungaqhelekanga, yintsha.
Ixesha lesihlanu aliphambuki kwisakhelo sokutyikitya. Ezahlukahlukeneyo uthi ezi ziqendu "ziya kungena nzulu kwimeko yobukrelekrele bungengobamntu, itekhnoloji ye-smart kunye nenyani ebonakalayo."
Nangona ixesha lincinci, ukulahlwa akunjalo.
Umdlalo weqonga u-Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport kunye no Ludi Lin.
Kwabo bangaziyo Black Mirror ucofe into enokwenzeka ukuba itekhnoloji iqale ukulawula abantu nokuba yimpembelelo okanye kukuzazi. Ezi mabali zilumkisayo zithunyelwe ngokwenyani kumda wentsomi kunye nokwenzeka.
Jonga itreyila engezantsi: